Himalaya Dainik » यी ३ राशिको हुन्छ सानै उमेरमा करोडपती बन्ने योग !
यी ३ राशिको हुन्छ सानै उमेरमा करोडपती बन्ने योग !
ज्योतिषी शास्त्रअनुसार मानिसहरुको भविष्यवाणी आफ्नो राशिहरुबाट पनि थाहा हुने बताउछन् । किनभने जन्म, विवाह, मृत्युको लागी पनि राशि आवश्यक हुन्छ ।
यो पनि : थाहा छ ? महाअल्छी हुन्छन् यी ५ राशिका व्यक्ति !
संसारमा यस्ता धेरै मानिस हुन्छन्। जो महाअल्छी पनि हुन्छन्। यिनीलाई यति आलसी हुन्छन् कि आफ्नो लाभको लागि पनि कुनै कार्य गर्न नपरे हुन्थ्यो भनेर सोच्छन्। ज्योतिषशास्त्रका अनुसार ५ राशि यस्ता छन् । जुन राशिका मानिस महाअल्छी हुन्छन्।
यस राशिका मानिसको अलस्यतासँगको सम्बन्ध नजिकको मित्रसँगको सम्बन्ध जस्तै हुन्छ। यिनीहरु पुरै दिन एकै ठाउँमा बसेर वा सुतेर आफ्नो समय व्यर्थ फाल्न सक्छन्। यिनीहरु यतिसम्म आलसी हुन्छन्। कि आफू सुतेपछि खानेकुरा पनि अरुले लेराएर खुवाइदिए हुन्थ्यो भनेर सोच्छन्।
कर्कट राशि: यस राशिका मानिसको आलस्यतासँगको सम्बन्ध नजिकको मित्रसँगको सम्बन्ध जस्तै हुन्छ । यिनीहरु पुरै दिन एकै ठाउँमा बसेर वा सुतेर आफ्नो समय व्यर्थ फाल्न सक्छन्। यिनीहरु यतिसम्म आलसी हुन्छन्। की आफू सुतेपछि खानेकुरा पनि अरुले ल्याएर खुवाइदिए हुन्थ्यो भनेर सोच्छन्।
सिंह राशि: यिनीहरुलाई सामान्यतया जगरिलो र जोशिलो मानिन्छ। यस राशिका मानिस सिंह जस्तै राजाको जस्तो जीवन बिताउने स्वभावका हुन्छन्। तर यिनीहरु जगरिलो त्यहि समयमा हुन्छन जब उनीहरु आफूलाई मन पर्ने कार्य हुन्छ। आफूलाई अनुकुल नहुने कार्य गर्नको लागि भने यिनीहरु जस्तो आलसी हुन्छन्।
वृश्चिक राशि: यस राशिका मानिस पनि आलस्यताको मामलामा निकै अगाडि हुन्छन्। यिनीहरुलाई कुनै पनि कार्य गर्न निकै गाह्रो हुन्छ आलस्यताको कारणले गर्दा । तर यदि आलस्यता छोडेर अगाडि बढ्ने हो भने यिनीहरु जिन्दगीमा निकै प्रगति गर्न सक्छन्।
मीन राशि: आलस्यता यस राशिका मानिसको पूरा जिन्दगी भरिको समस्या बन्न सक्छ। यी मानिसहरु आफ्नै सफलता र लाभको लागि पनि कार्य गर्न आलसी गर्छन्।
घरमै आइसोलेसनमा बस्दा साँस फेर्न गाह्रो भयो ? तुरून्त अपनाउनुस् यी ९ उपाय
बिहेपछि झनै ‘बोल्ड’ आँचल [फोटो फिचर]
रुखमा रहस्यमय जनावर देखे, सहरका सबै डराए, जब वास्तविकता खुल्यो….
यी ५ राशिका मानिस हुन्छन् महाअल्छी
के तपाईलाई थाहा छ ? बच्चा जन्माउन उत्तम महिना कुन हो !
प्रकाश सपुतको नयाँ गीत युट्युबको ट्रेन्डिङमा (भिडियो)